बाघ सर्वेक्षणमा प्रयोग भएका ५ वटा क्यामेरा चोरी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बाघ सर्वेक्षणमा प्रयोग भएका ५ वटा क्यामेरा चोरी
पुस ७, २०७८ रासस
नवलपुर — राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षणमा प्रयोग भएका स्वचालित ट्र्याकिङ क्यामेरा चोरी भएका छन् । चितवन पर्सा कम्प्लेक्सअन्तर्गत क्लस्टर नम्बर १ मा बाघ सर्वेक्षणका लागि राखिएको पाँच वटा क्यामेरा चोरी भएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ ।
निकुञ्जमा गत मंसिर १९ गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण २०७८ का लागि विभिन्न स्थानमा राखिएका पाँच वटा क्यामेरा चोरी भएका हुन् । बाघ सर्वेक्षणका लागि राखिएको क्यामेरामध्ये नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा चार तथा चितवनमा एउटा क्यामेरा चोरी भएको निकुञ्जले जनाएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले नवलपरासीको कावासोतीमा चार वटा क्यामेरा तथा चितवनको कालिका नगरपालिका क्षेत्रबाट एउटा क्यामेरा हराएको जानकारी दिए ।
बाघ गणनाका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा स्वचालित ट्र्यापिङ क्यामेरा राखेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई तीन वटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर पहिलो क्लस्टरमा पर्ने निकुञ्जको मुख्यालय कसरादेखि पश्चिमतर्फ नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को त्रिवेणीसम्मको क्षेत्रमा बाघ सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ । आचार्यले बाघ सर्वेक्षणका लागि निकुञ्ज, मध्यवर्ती, सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनलाई ग्रिड बनाएर क्यामेरा राखिएको जानकारी दिए ।
नेपालले सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटसबर्गमा भएको बाघ पाइने देशहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बाघको सङ्ख्या २५० पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सन् २०१८ मा भएको बाघ सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा बाघको संख्या २३५ वटा पुगिसकेको छ ।
प्रकाशित : पुस ७, २०७८ १९:३१
लुम्बिनी अस्पतालमा एचआईभी र हेपाटाइटिस 'बी' का बिरामीलाई पनि डाइलासिस सेवा
पुस ७, २०७८ अमृता अनमोल
बुटवल — लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले एचआईभी र हेपाटाइटिस बीका बिरामीलाई पनि डाइलासिस सेवा सुरु गरेको छ । त्यसका लागि अस्पतालमा थप १० वटा डायलासिस बेड व्यवस्थापन गरी बुधबारबाट सेवा थपेको हो ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. इन्द्र ढकालले काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता रोक्न एचआईभी र हेपाटाइटिस बीका बिरामीलाई पनि डायलासिस थालिएको बताए ।
प्रदेशका स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजीत थारुले बुधबार डाइलासिससहित अस्पतालका थप तीन सेवाको शुभारम्भ गरे । दुर्घटनामा परेर आउने बिरामी बढेपछि अस्पतालमा ट्रमा सेवा सुरु भएको छ । ४ बेडबाट सुरु भएको सेवा विस्तार गरेर लगिने छ ।
कोभिड इमरजेन्सी सेवासहित थप ४ वटा विशेष सेवा सुरु गरेको छ । कोभिडका बिरामीका लागि छुट्टै भवनमा इमरजेन्सी सेवा सञ्चालन गरी त्यसमा २२ बेड राखिएको छ । अस्पतालमा २० बेड आईसीयू कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याइएको छ । हाल अस्पतालमा दैनिक ८ देखि १० जना कोभिड संक्रमित बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।
अस्पतालमा बिरामीका आफन्तको भीड कम गर्न भिजिटिङ पास सुरु भएको छ । अब निश्चित समयका लागि अस्पताल गेटमा नाम दर्ता गराएर मात्रै अस्पतालभित्र प्रवेश गर्न र बिरामी भेट्न पाइने सूचना अधिकारी डा. नेत्र रानाले बताए ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलले बुधबार थप सेवाको सुभारम्भ गर्दै ।
प्रकाशित : पुस ७, २०७८ १९:१५